Kalandrie Zaragozano: inona izany, toetra sy tantara | Meteorolojia amin'ny tambajotra
Portillo Alemanina | 10/02/2021 13:07 | Fisarahana
Androany isika dia hahalala kalandrie somary miavaka izay mitazona hatsarana sy hatsarana satria tsy mifantoka amin'ny siansa izany fa manana faminaniana mandritra ny herintaona tsy misy henjana siantifika. Momba an'io Tetiandro Zaragozano. Izy io dia famoahana isan-taona Espaniôla izay misy ny vinavinan'ny toetr'andro sy ny astronomia mandritra ny taona kalandrie iray manontolo ary tsy misy henjana siantifika.
Amin'ity lahatsoratra ity dia holazainay aminao ny tantara sy ny toetran'ny kalandrie Zaragozano.
1 Fiandohan'ny kalandrie Zaragozano
2 Tantaran'ny tetiandro Zaragozano
3 Fomba fiasa lehibe
Fiandohan'ny kalandrie Zaragozano
Ny fanontana voalohany ny tetiandro Zaragoza dia natao tamin'ny taona 1840. Nanomana izany ilay mpanandro espaniola, Mariano Castillo y Ocsiero. Tsy tapaka, ankoatry ny taona vitsivitsy izay nitrangan'ny ady an-trano Espaniôla, dia nohazavaina sy namboarina izany. Saika ny edisiona rehetra dia toa ilay mpanaingo ihany no manondro ny sarin'ilay mpanandro. Ny mpanandro hoy i lehilahy dia manana endrika kanto tokoa. Mikorontana tanteraka ny volony ary manana endrika manetriketrika izy.
Amin'izao fotoana izao dia tsy vita pirinty ara-batana intsony izy ireo, fa azo vidiana amin'ny Internet. Na izany aza, dia mitazona ny endriny mitovy amin'ny fonony sy ny atiny. Ny anaran'ny kalandrie Zaragozan na inona na inona mpanoratra avy any Zaragoza. Natao hanomezam-boninahitra ny astronoma espaniola Victoriano Zaragozano sy Gracia Zapater io. Teraka tao Puebla de Albortón tamin'ny taonjato faha-XNUMX ity astronoma ity ary nalaza tamin'ny androny. Ary nahalala zavatra betsaka momba ny astronomia izy ary nanangana alimanaka nifaninana ho an'ny mpahay siansa espaniola iray hafa izay niavaka tamin'ny fianarany momba ny fanandroana, matematika ary ny tantara voajanahary. I Jerónimo Cortés no nifaninana.
Tantaran'ny tetiandro Zaragozano
Ny tantaran'ny kalandrie Zaragozano dia manomboka aorian'ny fanontana voalohany. Ny fanaparitahana azy dia nahatratra ny lafivalon'ny Espana tamin'ny endrika roa natokana tamin'izany fotoana izany. Ity kalandrie ity dia misy a ravin-taratasy aforitra amin'ny antsasaky ny iray amin'ireo mpivarotra tsara indrindra ary ilay maodely hafa dia famoahana paosy mitovy habe amin'ny ravin-taratasy mivalona.
Androany isika dia zatra manana vaovao marobe momba ny toetr'andro tsy ho an'ny firenentsika ihany fa ho an'izao tontolo izao koa. Azonao atao ny mahalala ny toetrandro noho ny maodely sarotra isan-karazany izay mandalina izany tohanan'ny sary, sary zanabolana, rafi-matematika ary fahalalana lehibe kokoa. Noho io teknolojia io dia azo vinavinaina amin'ny fomba marina tsara ny toetrandro mandritra ny andro maromaro. Na izany aza, tsy zava-baovao ny filàna ny fahafantarana ny toetrandro. Efa nisy io filàna io hatramin'ny andro taloha. Izany no iray amin'ireo antony nanandramana ny hahafantatra izay zavatra hitranga mialoha.
Talohan'izay, ny toetr'andro dia mety ho fantatra amin'ny alàlan'ny fandinihana mivantana ireo famantarana izay azo jerena amin'ny toerana misy azy ary ny fiovan'ny toetr'andro toy ny rahona, rivotra ary mari-pana izay nisy tamin'izany fotoana izany dia nianatra. Tsy maintsy niantehitra tamin'ny zavatra niainan'ny zokiolona sasany ianao na ny vinavina nahatonga azy ireo ho mafana sy roa toy ny tetiandro Zaragozano. Tahaka ny tranga ankehitriny, ireo izay natokana ho an'ny fambolena no nanao ezaka manokana hanoratra sy hahafantatra hoe hanao ahoana ny taona manaraka mba hahafahany misafidy ny fotoam-pambolena sy fijinjana hanatsara ny vokatra. Androany dia olona maro mandray ireo fandinihana ireo izy ireo na dia amin'ny fomba mahaliana kokoa aza no anaovan'izy ireo izany noho ny tanjon'ny siansa.
Ity kalandrie ity dia nampiasaina ary nampiasaina hatramin'ny nananganana azy ho boky fandriana ho an'ny tantsaha satria ny vokatra dia mety hiatrika toe-piainana ratsy maro. Ny haintany, tafio-drivotra ary dingana amin'ny volana dia misy fiatraikany amin'ny vokatra ary noho ny tetiandro Zaragozano dia azo atao ny manana fahalalana bebe kokoa momba izany.
Ny vidiny voalohany nananan'ity kalandrie ity tamin'ny 1840 dia tokony ho tao reais satria io no vola azo tamin'izany fotoana izany. 28 taona taty aoriana vao nampidirina tany Espana ho peso ara-dalàna ny peseta. Ny vidiny dia 15 teo ho eo monja tamin'ny 1920 (izay mitovy amin'ny euro ankehitriny). Rehefa nandeha ny taona dia tafakatra efa ho 20 duros na 100 peseta na 0,60 cents ny vidiny. 1.8 euro izao ny vidiny. Araka ny hitanao, ny fironana amin'ny fampiakarana ny vidin'ny vokatra mitovy dia efa nandroso an-taonany maro.
Tamin'ny taona 1900, ny kalandrie Zaragozano dia namidy mafy tao amin'ireo kianja malalaky ny tanàna sy ny tanàna. Ny ankamaroan'ny mpanjifa dia tantsaha ary manodidina ny 1.270.000 no amidy. 300.000 XNUMX izao no amidy. Araka ny efa nampoizina, miaraka amin'ny fandrosoan'ny siansa, io karazana kalandrie io dia manana valiny nostalgika sy mpandala ny nentin-drazana ho fironana haniry fa tsy henjana siantifika.
Raha mandinika tsara ny sasany amin'ireo pejy isika nandritra ny tantara, ity kalandrie ity dia afaka mampiseho amintsika singa maro isaky ny vanim-potoana. Ohatra, amin'ny fonon'ny taona 1883 dia azo refesina ny fampitandremana mba tsy ho voafitaky ny kalandrie hafa fakana tahaka. Ohatra iray hafa ny fonony sy ny ao anatin'ny kalandrie Zaragozano nanomboka tamin'ny 1936. Tao amin'ity gazety ity dia nisy tahiry dokam-barotra miafina izay nanondro sy naneho ireo olana samihafa nananan'ny fiarahamonina tamin'izany fotoana izany. Aza adino fa tamin'io fotoana io dia akaiky ny ady an-trano Espaniola hita eo amin'ny fonony ireo andian-teny toa an'i Viva Franco! ary ¡Arriba Spain!
Teo afovoan'ny ady dia tsy noroahina mihitsy ny hanalavitra ny fitondrana mpandresy ary nosoratana teo amin'ny fonon'ireo fanambarana ireo izy ireo, tamin'izany fotoana izany dia marina ara-politika ary fanahy iniana nampitomboina ny fampitomboana ny varotra. Nandritra ny taona maro, nihena tsikelikely ireo doka amin'ny kalandrie Zaragoza mandra-pahatongan'ny fisiany intsony. Natao ny hanome lanja bebe kokoa sy ny fanaovana dokambarotra an'ity kalandrie ity, anisan'izany ny vidiny amidy amin'ny besinimaro. Ny fonony ankehitriny dia azo jerena mitovy amin'ny taona lasa ary hitohy ho toy ny mariky ny hatsarany.
Manantena aho fa amin'ity fampahalalana ity dia afaka mianatra bebe kokoa momba ny tetiandro Zaragozano sy ny mampiavaka azy ianao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Meteorolojia amin'ny tambajotra » Haitoetrandro » Fisarahana » Kalandrie Zaragoza